Oxford English Urdu Dictionary APK အား Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Oxford English အျောဒူအဘိဓါန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
Oxford English Urdu အဘိဓါန် APK
အဆိုပါ Oxford English အျောဒူအဘိဓါန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် ယခုရရှိနိုင် အခမဲ့!
ပါကစ္စတန်နှင့်အိန္ဒိယ၏အူဒူဘာသာစကားအတွက်အခွင့်အာဏာအရှိဆုံးသောဘာသာစကားကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စကားလုံးများ၊ စကားစုများ၊ စကားအသုံးအနှုန်းများ၊ သိပ္ပံနည်းကျနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဝေါဟာရများအပြင်အင်္ဂလိပ်၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊
Oxford English Urdu Dictionary အက်ပလီကေးရှင်းမှာ -
•ဂန္များမှခေတ်သစ်ဘာသာစကားအသုံးပြုမှုအထိ 85,000 entries များထက်ပိုသည်
•တိကျသောအသံထွက်ကိုလေ့လာနိုင်ရန် IPA သင်္ကေတ
ပထမဆုံးအဘိဓာန်တွင်အဘိဓာန်သည်အူဒူအဘိဓာန်၊ နိုင်ငံတကာ Phonetics အက္ခရာ (IPA) အသံထွက်တွင်ပါဝင်သည်၊ ၎င်းသည်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောစကားလုံးများ၏အသံနှင့်ပြောသောအက္ခရာများကိုတိကျသော၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောကိုယ်စားပြုမှုကိုပေးသည်။
NEW!Tap to Translate အင်္ဂါရပ်ပါသောမည်သည့် Android app မှမဆိုစကားလုံးများကိုဘာသာပြန်။ အရောင်အသွေးသစ်သောလေးမျိုးအနက်မှမည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုပုံစံပြုပါ။
MobiSystems, Inc မှအရည်အသွေးရှိသောဘာသာစကားအက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်လာမည့်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးနှင့်ဘာသာစကားကိရိယာများလည်းပါ ၀ င်သည်။
SEARCH TOOLS - ရှင်းလင်းသော၊ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်နှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောစကားလုံးကြောင့်စကားလုံးများကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေသည်။
• autocomplete ရှာပါ သင်ရိုက်သည့်အခါဟောကိန်းများကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်စကားလုံးများကိုအလျင်အမြန်ရှာဖွေနိုင်သည်
တိကျသောစကားလုံးကိုရှာဖွေသော်လည်း၎င်းကိုစာလုံးပေါင်းပုံကိုမသိပါ။ ငါတို့အလိုအလျှောက်ဖုံးလွှမ်းထားတယ် 'မရေရာသော filter' စကားလုံးစာလုံးပေါင်းကိုပြင်ပေးဖို့လိုတယ် 'ကဒ်ပြား' စာလုံးတစ်လုံး၏တစ်ခုသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအစားထိုးရန် ('*' or '?')
• ကင်မရာရှာဖွေခြင်း ကင်မရာ viewfinder တွင်စကားလုံးများကိုရှာဖွေ။ ရလဒ်များကိုပြသသည်
•ငါတို့အသုံးပြုပါ Voice ကိုရှာဖွေရေး သင်တစ် ဦး entry ကိုစာလုံးပေါင်းမည်သို့မည်ပုံမသိရပါဘူးအခါ
• အသစ် ဘာသာပြန်ရန်ကိုနှိပ်ပါ အခြားအက်ပ်များမှ entries တွေကို။
• စကားလုံးမျှဝေပါ သင်၏ကိရိယာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောအက်ပ်များမှတဆင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
သင်ယူခြင်း Tool များ - သင်၏ဝေါဟာရပိုမိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအင်္ဂါရပ်များ။
ကျယ်ပြန့်သောစာကြည့်တိုက်မှစာလုံးများပါသောစိတ်ကြိုက်ဖိုဒါများဖန်တီးရန် 'အကြိုက်ဆုံး' အင်္ဂါရပ်
•ကြည့်ရှုထားသောစကားလုံးများကိုအလွယ်တကူပြန်လည်သုံးသပ်ရန် 'မကြာသေးမီက' စာရင်း
•သင်၏ဝေါဟာရကြွယ်ဝမှုကိုနေ့စဉ်တိုးချဲ့ရန် 'နေ့၏စကားလုံး' အပိုင်း
ပင်ရယူပါ နောက်ထပ် ပရီမီယံဖြင့်:
• အသံထွက် - သူတို့၏အသံထွက်ကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်စကားလုံးများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလေ့လာပါ
• အော့ဖ်လိုင်း mode ကို - WiFi မရှိ၊ ပြproblemနာမရှိဘူး။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲကြည့်ရှုရန်သင်၏စက်ပေါ်တွင်စကားလုံးများကိုသိမ်းပါ
• ဦး စားပေးထောက်ခံမှု - မည်သည့် app နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြissuesနာကိုမဆိုအမြန်ဆုံးအထောက်အပံ့ရယူပါ
•ကြော်ငြာမရှိ - In-app ကြော်ငြာများလည်းမရှိတော့ပါ
• Help Center အသစ်
•ပိုမိုမြန်ဆန်သော app startup
• Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု
Oxford English အျောဒူအဘိဓါန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
6.77 ကို MB
onTouch အင်္ဂလိပ် ...